Ejipta: Ireo Fifandraisana tsy an-kiteny eny an-dàlana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2011 18:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 한국어, Español, Italiano, македонски, русский, عربي, srpski, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny fandrakofana manokana ny Teny sy Aterineto
Isika amin'ny maha-olombelona dia manana ny fahafahana mifandray amin'ny alalan'ny teny. Na izany aza, ao anatin'ny tanàna be olona sy maresaka toa an'i Kairo, mila mampiasa fomba fiteny hafa ankoatra ny teny tononina isika mba hifandraisana.
Arabe be olona ao Kairo – Sary nalaina avy ao amin'ny kaonty Flickr an'i mileusna, ampiasàna ny Creative Commons license
Lyndall EL Masry, vehivavy mpila ravin'ahitra monina ao Kairo, nahamarika fa ireo olona mifampizàra taxi-bus ao Cairo dia mampiasa karazana fihetsika amin'ny tànana mba hampitàna ny toerana tiany haleha.
Matetika no hitako ho zavatra sarotra iainana ny mandray fiarakaresaka sy bus – noho ireo Arabo miteny mafy sy haingana – ny fihetsiky ny tànany dia manana ny dikany manokana manondro ny tiany haleha.
Ireny firesaka atao amin'ny alalan'ny tànana ireny dia manamora ny fifampiresahana eo amin'ireo mpamily sy ireo izay miandry taxi-bus dieny mbola eny lavitra eny any amin'ireo arabe maresaka. Ashraf Hamdy – Ejiptiana iray mpanao sariitatra – ao amin'ny bilaoginy dia niezaka handrakitra ny momba ireny fihetsika amin'ny tànana ireny sy ny dikan'izy ireny. Ity misy sary iray hanazavàna ireo karazana fihetsika atao amin'ny tànana :
Ny marina, ny fampiasàna ny fifandraisana atao amin'ny fihetsika atao amin'ny tànana dia zava-mahazatra eny anivon'ny vondrom-piarahamonin'ny afa-miresaka rehefa amin'ny toerana tsy azo ifampiresahana na voaràra, toy ny an'ireo mpisitrika an-drano na ny mpilalao baolina fandàka, ary any amin'ny efitrano fandraisana an-tsary ny fandaharan'ny fahitalavitra na any amin'ny tsenam-bola. Mazava loatra ihany koa fa ho an'ireo mpiteny Arabo, ny fomba fifampiresahana amin'ny alalan'ny tànana dia manakaiky kokoa ny fakàn-tàhaka fihetsika aloha raha ampitahaina amin'ny hoe tena maha-fomba fifandraisana tsy an-kiteny sy saro-takarina azy, satria amin'izay fotoana izay ny fihetsika hita maso ataony dia misy ifandraisany amin'izy ireo sy ny zavatra hitany.
Ny fampiasàna ny anjomaran'ny fiara
Fomba fifampiresahana iray hafa – saingy henon'ny sofina kosa amin'ity indray mitoraka ity – ny fampiasàna ny anjomaran'ny fiara. Dr_ElSioufy nanoratra lahatsoratra iray [ar] ao anaty sehatra fifampiresahana iray ao anaty aterineto mikasika ireo endrika fifandraisana ireo. Hoy izy :
Ny tena nampiasàna ny anjomaran'ny fiara tany am-boalohany tany dia ny mba hanampiana ny mpamily sy hampitandremana ireo mpamily hafa. Tsy misy hafa amin'ireo jiro famantàrana ihany, izay tena zava-dehibe amin'ny familiana fiara ihany koa, ary manampy amin'ny fisorohana ny loza. Na izany aza, nanjary fomba iray hifampiresahana koa izy ireny izao eo amin'ny samy tanora Ejiptiana. Miovaova izy io arakaraky ny hoe fampitandremana ny fiara hafa ny fisian'ny radar mpitsikilo hafainganana ao akaiky ao, na fanehoana finamànana, na hatezerana koa indraindray. Ny fianarana ny teny no fomba voalohany mankany amin'ny fahafantàrana azy. Ary eto aho dia manampy anareo hianatra ity fomba firesaka vaovao ity.
Avy eo dia notohizany tamin'ny famariparitana ny ampahany isanisany amin'ny fiara sy ny fiantso azy manokana .
Jiro famantarana havanana mirehitra indroa arahan'ny havia mirehitra indroa koa dia midika fa ilay fiara ery alohanao dia mangataka anao mba hamono ny jiro mahataka-davitra (Phare) ka hampiasa kosa ny jiro fifamezivezena (Code),indrindra fa rehefa eny amin'ireo lalambe migodana ivelan'ny tanàna.
Ny havanana mirehitra indray mandeha arahan'ny havia mirehitra indray mandeha kosa dia midika fa voaompa ianao izay [toy ny mananga fanondro adala – doigt d'honneur].
Fanairana fohy indroa misesy kosa midika hoe ‘misaotra anao’.
Rehefa hisongona fiara vaventy eny amin'ireny lalambe migodana ireny dia mandefa fanairana azy toy ny miarahaba ianao, ary tokony hamaly an'iny aminà fanairana koa izy raha tsy hoe matory.
Amin'ny fomba firesaka vaovao eo amin'ny fiara indray ny fanairana roa fohy misesy arahan'ny iray lavabe dia midika hoe ‘tiako ianao’.
Ny fanairana telo fohy mifanesy arahana iray lavabe dia teny ratsy, beep bip bip biiiiiiiiiiiiip [zanaka mpivaro-tena]…..
Famafàna fitaratra any aoriana:
Raha mifanenjika aminà fiara hafa ianao, ary nahasongona azy, ampiasao ny famafàna fitaratra aoriana hilazana aminy hoe ‘veloma'!
Nihevitra aho fa zavatra iavahan'ny Ejipsiana manokana ny fampiasana anjomaran'ny fiara ho fomba hiresahana mandra-pamakiko mikasika ireo mpianatra ao amin'ny Departemantan'ny Siansa momba ny Fanovozam-pahalalàna ao UC San Diego izay nanoratra mikasika ny fisian'ny zavatra mitovy amin'izany koa any India tao amin'ny bilaogin-dry zareo, izay nametrahan-dry zareo fanontaniana raha efa nisy fanadihadiana mikasika io tranga io.
Tamin'ny diako farany tany India dia tena isan'ny zavatra nomarihako ny fampiasana betsaka ny anjomaran'ny fiara nataon'ilay mpamily nitondra ahy ary ny olona tsirairay eny an-dàlana. Tsy tahaka ny any Etazonia, izay ny anjomara dia ampiasaina ho endrika fifandraisana fa tsy ho fanehoana hatezerana na hasosorana. Mety ho zavatra iray hahaliana ny handalina ny amin'ity fifandraisana aminà feo tokana ity. Misy mana-kevitra momba ny endriky ny fanadihadiana tokony hatao ve? Inona koa no zavatra hafa mety ho entin'ny fampiasàna anjomaran'ny fiara eo amin'ny fanovozam-pahalalan'ny olona? Ento ho fantatray ao anaty fanehoan-kevitra.
Gary Runn koa dia nampitaha ny kolotsainan'ny fampanenoana anjomara any Etazonia, Italia ary India. Ireo Jamaikana koa dia manana ny fomba firesany amin'ny alalan'ny fampanenoana ny anjomaran'ny fiara miaraka amin'ny voambolana azy manokana. Ny karazana fifandraisana toa izany dia afaka ampifandraisina amin'ny marika amin'ny setroka sy amponga nampiasain'ireo razambentsika taona arivo maro lasa izay. Ary satria isika mampiasa “klaxon” mba hifandraisana,tsy hety ve raha mampiseho ny toetran'ny tompony koa ny fampiasana izany? BBC dia namoaka lahatsoratra momba ny fikarohana tamin'ny filazàna fa zava-dehibe iray amin'ny mpividy ny feon'anjomara…..
Prof Van Leeuwen, manam-pahaizana amin'ny fandinihana ny dikan'ny feo ao amin'ny Foibe ho an'ny Teny sy ny Fifandraisana ao amin'ny anjerimanontolo, dia nilaza fa nifantoka kokoa tamin'ny feon'ny anjomara ny mpiasa, izay mety ho zava-dehibe amin'ny fandraisan'ireo tena mpividy fiara fanapahan-kevitra. Nilaza izy fa miha-maro ireo orinasa mpanamboatra fiara no mampitovy ny feon'ny anjomara sy ny maha-izy azy an'ilay fiara.
Farany, tsy mahaliana ve hoe na mandroso tahaka ny inona aza ny fitaovam-pifandraisantsika ankehitriny, mbola miverina amin'ny fitaovam-pifandraisana taloha ihany isika? Ity somaiso manaraka ity izay nifandefasan'ny mpifankatia [ar] dia manaporofo fa na dia manana finday aza ianao eny an-tananao dia mety hifidy izany fomba taloha izany noho ny antony fitsitsiana.
Raha tia ahy ianao dia ampanenoy indray mandeha, raha tia ahy bebe kokoa ianao dia ampanenoy in-droa, ary raha tena tia ahy amin'ny fonao manontolo ianao dia antsoy aho ary teneno ahy.
Mbola tsy mandeha ny blaogin'i Ashraf Hamdy amin'izao fotoana izao, ka indreto ny dikatenin'ireo baiko tanana amin'ny sary etsy ambony:
Ny iray farany ambony indrindra amin'ny ankavanana dia midika hoe “Làlana Piramida” (hita ny endrika piramida), eo ambany indray ny baiko faharoa dia midika hoe amin'ny faran'ny tetezana, ny manaraka midika hoe mitovy lalana, dia ny ambany faha-efatra milaza hoe amin'ny fiolahana manaraka, ary ny farany ambany kosa midika hoe manomboka any Faissal hatrany Boulack.
Ny voalohany ery ambony amin'ny ankavia dia manana dikany samihafa araka ny toerana misy anao, raha any Faissal io midika hoe Tahrir, raha any amin'ny toeran-kafa kosa dia midika hoe manohy mahitsy na amin'iny lalana iny ihany. Ny manaraka azy io midika hoe Giza, ny fahatelo milaza hoe ny distrika fahafito sy fahavalo (ny baiko dia mitovy ny isa fito sy valo amin'ny teny Arabo). Ny fahaefatra milaza hoe Dokki (distrika iray any Caire, izay mitovy amin'ny teny hoe mandondom-baravarana amin'ny teny Arabo, izay no mahatonga io baiko io), ary ny farany ambany indrindra dia manondro ny toerana antsoina hoe El Tawabeq (Ny Haavo, izay fantatra tamin'ny voalohany hoe Ny haavo telo).